StreamKar အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（51.8MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် StreamKar - Live Streaming, Live Chat, Live Video
Streamka သည်လူတို့နှင့်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများအတွက် Live Streaming App ဖြစ်ပြီးသူငယ်ချင်းများနှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့ရန်ဖြစ်သည်။ Streamka သည်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယို streaming social application ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏အထူးအချိန်လေးများစီးဆင်းစေနိုင်သည်။
ကျပန်း chats များ, ရယ်စရာဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုတိုများနှင့်အတူအံ့အားသင့်စရာများနှင့်အုပ်စုလိုက်တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်း။
✔spotlights: သင်၏အထူးကျွမ်းကျင်မှုများကိုပြပါ ကမ္ဘာ့
ali baba ၏ဂူ, ရတနာအမဲလိုက်, SK ဒါဘီနှင့် More) ✔sk SKID: ယခုသင်သည်သင်၏ SK သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ chat group တစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ✔pkပွဲများ PK Game
ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုဖြတ်သန်းနိုင်ပြီး Live Videos ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတိုက်ရိုက်ကစားနည်းများကိုပျော်မွေ့နိုင်သည်။ မည်သူမဆိုသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်ကမ္ဘာအကြားသူ၏အထူးအရည်အချင်းကိုပြသနိုင်ပြီးကျော်ကြားနိုင်သည်။ သီချင်းဆိုခြင်း, အက, အစာစားခြင်း, စကားပြောခြင်း, ခရီးသွားခြင်းနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကိုမည်သူ့ကိုမျှပြသနိုင်သည်။ သင်၏အကောင့် Facebook, Twitter, Instagram နှင့် Google Now ကိုချိတ်ဆက်ပါ။
Safe Sejecture ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သန့်ရှင်းသောအကြောင်းအရာများ -
■အသုံးပြုသူများခံစားရသည့်လုံခြုံသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးသည် လုံခြုံမှုနှင့်အလွဲသုံးစားပြုခံရခြင်းမခံရ။ Streamka သည် 24 နာရီစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး0န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု. ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုပြ enfor ္ဌာန်းရန်, သင်၏အိပ်မက်များကိုရန်ပုံငွေများဖြင့်ရန်ပုံငွေများ။ ထောင်နှင့်ချီသောလူများတို့သည်မိမိတို့၏အက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြု. မိမိတို့ကိုယ်နှင့်သူတို့၏မိသားစုကိုထောက်ပံ့သောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီ။ သူတို့ကသူတို့အတွက်အရမ်းဂုဏ်ယူတယ်။ ငါတို့အသုံးပြုသူများအားလုံးကိုအိပ်မက်မက်ရေးသမားတစ် ဦး အနေဖြင့် steamkaar ကိုကြည့်ရှုရန်လိုသည်။ သူငယ်ချင်းအသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံပါ။ ကျွမ်းကျင်မှုများ, တိုက်ရိုက်သီချင်းများ, Dance စသည်တို့ကိုပြသပါ။ ■သင်၏နောက်လိုက်များနှင့် ပတ်သက်. သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုများကိုပြသခြင်းအားဖြင့်အကျိုးအမြတ်ကိုရယူပါ။
Social Media တွင်လူသိများပါ။ Star
Streamka တွင် Live Live Streaming
လူပေါင်း 2000 ကျော်နေ့စဉ်စီးဆင်းသည်။ သူတို့ကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးသူတို့နှင့်အတူတိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုပါ။ ■ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအွန်လိုင်းသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူနေပါ။ ■ကာရာအိုကေနှင့်သင်၏သီချင်းကျွမ်းကျင်မှုကိုပြသပါ, သင်၏မိတ်ဆွေသစ်များနှင့်အတူဘဝအကြောင်းပြောဆိုခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများကိုလေ့လာပါ။ အခမဲ့ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု, အသံ chat, အသံ chat chat
■ World Video Watch ကိုကြည့်ပါသို့မဟုတ် streamer ၏အခန်းမဆိုနှင့်အတူ 1 ကိုသွားပြီး 1 ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု 1 ခုနှင့်စကားပြောပါ။ ■ multi multi ည့်သည်အင်္ဂါရပ်ကို သုံး. လူ6ယောက်အုပ်စုတစ်စုကို အသုံးပြု. အုပ်စုတွင်သူတို့နှင့်စကားပြောပါ။
■ထုတ်လွှင့်သူများ၏ virtual လက်ဆောင်များပေးပို့ခြင်းဖြင့်သင်၏ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်မှုကိုပြပါ။ မတူညီသောအရွယ်အစားများပေးပို့ရန်အတွက်အေးမြသောလက်ဆောင်များများစွာရှိသည်။ လက်ဆောင်များပို့ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်အပိုဆုကြေးအဆင့်ဆင့်ကိုရယူခြင်းအားဖြင့်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အွန်လိုင်းသြဂုတ်လများထံမှလူကြိုက်များသော, ကံကောင်းခြင်း, ထူးခြားသည့်လက်ဆောင်များကိုပေးပို့ပါ။
အလှအပ filter များနှင့်စတစ်ကာများ:
filter များနှင့်စတစ်ကာများ Live Stream Cat, Mouse, Crown နှင့် Queen စ်, မျက်နှာဖုံးများနှင့်ဖန်စီမျက်မှန်များဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အလှအပ filter filter, အဖြူရောင်, မျက်နှာ - ဓာတ်လှေကား, မျက်စိကြီးကြီး။
အထူးသီးသန့်ဖြစ်ရန်■အပိုအင်္ဂါရပ်များရယူခြင်းဖြင့်သင်၏တန်ဖိုးကိုပြပါ။ တံဆိပ်များကဲ့သို့အဆင့်မြင့်တိုးမြှင့်။ ဗွီဒီယိုအသံခေါ်ဆိုမှုများ။
■ Streamka တွင်သင်အကြိုက်ဆုံးသူငယ်ချင်းအတွက်အုပ်ထိန်းသူဖြစ်ပါစေ။
▪သင်အကြိုက်ဆုံး streamer အတွက်မဲပေးပြီးလက်ဆောင်များပို့ခြင်းဖြင့်သူသို့မဟုတ်သူမ၏အနိုင်ရပါ။ လျော့နည်းသွားသူတစ် ဦး ဝံ့ဖြည့်စွက်ရန်ရှိပါတယ်။ သငျသညျသူ့ကိုဝံ့ဝံ့နှင့်အသက်ရှင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်။
■ဘဏ္ freed ာရေးအမဲလိုက်ခြင်း။ သင့်ရဲ့ကံကြိုးစားပါ။ ကြေးဝါငွေနှင့်ရွှေရောင်ရင်ဘတ်များကိုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်လက်ဆောင်များ။
US နောက်ဆက်တွဲ & ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ "တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://www.streamekar.com
Facebook: @ streamka1
BR> Twitter: @Kar_stream: Instagram: Youtube: https://www.youtube.com/stradkarour.com/stradkarour.com/streamekarofications ကိုပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း / အကြံပြုချက်များကိုပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏0န်ဆောင်မှုများကိုမြှင့်တင်ပေးပါ ။